Nhau - Denda harisi kuzopera nekukurumidza！
"Kupararira munyika yose
Haizoperi mumakore 1-2 "
"Korona nyowani inogona kushanduka zvishoma nezvishoma kuita chirwere chemwaka wekufema chinotapukira nefuruwenza, asi kukuvadza kwayo kwakakura kupfuura furuwenza." Mangwanani-ngwanani kwaDecember 8, Zhang Wenhong, director weDhipatimendi rezvirwere zvinotapukira, Huashan Hospital, Fudan University, akadaro paWeibo. Musi wa7, Shanghai yakazivisa mhedzisiro yekuwanikwa kwenzvimbo nhanhatu dzakasimbiswa dzemakesi dzakataurwa pakati paNovember 20 na 23. Nzvimbo dzine njodzi dziri pakati dzakavhurwa mushure memavhiki maviri ekuvharwa. Nyika ichakavharwa zvishoma nezvishoma yave kushaya simba kune ese marudzi enhau, uye tarisiro yekudzivirira denda inoita kunge yakadzikama, asi zviitiko zvakati wandei zvakaratidza zviitiko zvinogona kuitika zvekuchinjana kwepasi rose gore rinouya. Maitiro ekutsinhana kwenyika dzepasi rose muchimiro chehosha
Nezve kufanana pakati peShanghai International Import Expo nemaitiro ekudzivirira ehutachiona eJapan Olympic Games, Zhang Wenhong akataura kuti kutanga, musi waNovember 10, Shanghai International Expo Expo yakavharwa zvine mutsindo pasi peyakavharwa-loop manejimendi. Inbound vanhu vakaita yakavharwa-loop manejimendi uye vakasiya nyika mushure memusangano. Vese vashanyi vanozoongororwa nucleic acid uye hapana zvimwe zvinomisikidzwa zvichaiswa. Vanhu vanopfuura mamirioni 1,3 vakapinda muCIIE. Kukura kwayo kwakabudirira kunogona kutariswa sekutsvaga kweakakura mabasa epasi rese ekudyidzana, kunyangwe padiki padiki.
Zhang Wenhong akaunza kuti svondo rapfuura aive nekuchinjana neakakosha nyika denda rekudzivirira muJapan. Zvidimbu zviviri zvemashoko zvakakodzerwa kutariswa. Imwe ndeyekuti Japan ichabata Mitambo yeOlympic sezvakarongwa, uye imwe yacho ndeyekuti Japan yakatotemesa jekiseni regore rose regore rinouya. Zvakadaro, ongororo dzeongororo dzinoratidza kuti chete 15% yevanhu vane chishuwo chakasimba chekubaya nhomba, vangangoita 60% vanozeza, uye vakasara ve25% vakataura pachena kuti havazobayiwa jekiseni. Matangiro ayo maOlimpiki anotanga pasi pemamiriro akadaro haigone kubatsira asi kuve inonakidza kufunga.
Matanho ekudzivirira echirwere akaziviswa neJapanese Komiti yeOlympic ane zvakawanda zvakafanana nezviri muShanghai International Import Expo. Izvo zvinogona kuoneka kuti matanho aya anogona kunge ari mareferensi template yenyika kuti itange kuchinjana mune ramangwana. Kune vatambi vanobva munyika nematunhu ane hosha dzakanyanya, vanofanirwa kuyedzwa hutachiona hutsva pavanosvika kunhandare dzendege dzeJapan. Mhedzisiro yemiedzo isati yavapo, vatambi vanogona kungogara munzvimbo yakatarwa voita manejimendi akavharwa.
Mukupesana neano kurwisa denda zano remaJapan Olimpiki, maOlympics eJapan anotarisira kuita nucleic acid kuyedza yekupinda mhiri kwemakungwa kuti vaone makwikwi. Mushure mekupinda, hakuzove nekurambidzwa kwekufamba uye pasina kupinda mukati, asi iyo yekumashure-yekupinda trajectory APP inoda kuiswa. Kamwe kana kesi ikaitika, chaiyo kudzivirira uye kutonga kunodiwa. Maitiro ekuteedzera ese epedyo vanobata uye anotora anoenderana denda matanho ekudzivirira. Izvi zvakafanana nematanho ekudzivirira uye ekudzivirira eShanghai International Import Expo uye denda remuno.
Kudzivirira chaiko uye kutonga kunozove sarudzo yakajairwa pasirese
Zhang Wenhong akataura kuti kudzivirirwa chaiko uye kutonga kunozoita sarudzo pasi rose. Munguva pfupi yapfuura, nzvimbo dzinoverengeka dzine njodzi pakati peShanghai dzakavhurwa. Kiyi yekudzivirira denda muShanghai nguva ino inonyanya kuvimba nekuteedzera kwakaringana uye kuongorora kwakazara-basa mune dzimwe nzvimbo dzine njodzi. Izvi zvakare zvinopa sarudzo kune makuru-makuru maguta kudzikisira mukana wezviitiko zvakakura pane zvehupfumi zviitiko kuburikidza nenzira chaiyo yekudzivirira uye kutonga.
Nekuwedzera kwemajekiseni, nyika ichavhurika zvishoma nezvishoma. Nekudaro, nekuti kubaiwa nhomba kunonetsa kuve kwakazara pasi rose (zvisinei nezvakabuda muongororo yezvinangwa zvejekiseni zvega kana chokwadi chekuti kugadzirwa kwepasirese kunonetsa kuzadzisa mune rimwe danho), denda repasi rose harizopera mukati memakore 1-2. Nekudaro, mune mamiriro ekuvhurwazve kwenyika uye kuisirwa denda rekudzivirira, chaiyo denda rekudzivirira rinogona kupedzisira rave sarudzo yakajairika pasirese mune ramangwana.
Akataura kuti mune mamiriro ekuvhurwa zvishoma nezvishoma kwenyika uye zvishoma nezvishoma kupararira kwemajekiseni, China yekurapa system inofanira kupindura zvakanaka. Mushure mekubaiwa vanhu vane njodzi huru, njodzi yemakorona matsva ichadzikira zvishoma nezvishoma mune ramangwana, uye inogona kushanduka zvishoma nezvishoma kuita chirwere chemwaka wekufema chiri pedyo nefuruwenza, asi kukuvadza kwayo kwakakura kudarika furuwenza. Panyaya iyi, zvipatara zvikuru zvinofanirwa kuve neyakajairika denda rekudzivirira uye yekupindura dhipatimendi, ndokuti, iro rinotapukira chirwere department. Mukupindura izvi, Shanghai Municipal Health System yakaita musangano kuShanghai First People's Hospital mukupera kwesvondo. Vamwe vatungamiriri vezvipatara vanobva kuYangtze River Delta uye nePearl River Delta vakapinda muhurukuro ine hupenyu uye vakakurukura zvizere nezveramangwana COVID-19 nzira dzekudzivirira nekudzivirira. . China yakagadzirira hutachiona uye neramangwana rakashama.